YOUTUBE ကိုချန်နယ်စာရင်းသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - YOUTUBE ကို - 2019
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များ - ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာအတွက်အဓိက tool ကိုများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုမှသူမ၏န်ဆောင်မှုပူဇော်ကြ၏။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကြော်ငြာနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်နိုင်ပါတယ်မိန့်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူအများကြီးကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များ, ပုံရိပ်အယ်ဒီတာများ, နှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်အဘို့, လွတ်လပ်စွာဖွစျစနေိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဒီနေ့အွန်လိုင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးပါမည်သည့်နေရာ, အကြောင်းပြောဆို။ ထိုသို့သောသယံဇာတများကိုအားသာချက်များ၏နံပါတ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆို Third-party software ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, အပြင်, ဒီဇိုင်းတစ်ခုခုကိုတစ်ဦးတည်းဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒါမှမဟုတ်ကမ်းလှမ်းတင်းပလိတ်များထဲကတစ်ခုကိုသုံးရန်နိုင်ပါသည်။
Method ကို 1: Printdesign
Printdesign - ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တစ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။ အသုံးပြုသူများအဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ခြစ်ရာကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဆင်သင့်တန်းပလိတ်က site ကိုပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီအမိန့်ထုတ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ဖို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးပြီး site ကိုမတွေ့ရှိသောအခါအားနည်းချက်များ, တင်းပလိတ်များတဲ့အစိုင်အခဲရွေးချယ်ရေးနှစ်သက်ပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးအခကြေးငွေအခြေခံပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဓိကစာမျက်နှာတွင်အနာဂတ်ကိုကဒ်များသင့်လျော်သောအရွယ်အစားကိုရွေးပါ။ ရရှိနိုင်စံ, ဒေါင်လိုက်နှင့်ယူရိုကဒ်။ အသုံးပြုသူကိုအမြဲတမ်းဒီရိုးရှင်းစွာ tab ကိုမှ navigate, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရွယ်အစားရိုက်ထည့်နိုင်သည်, "သင်၏အရွယ်အစားအမေး".
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်နေလျှင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ခြစ်ရာကနေဖန်ဆင်း"အဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များ၏ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါရန်ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ "စီးပွားရေးကဒ်တင်းပလိတ်များ".
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ပေါ်မှာ data ကိုတည်းဖြတ်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Editor ထဲမှာပွင့်လင်း".
အယ်ဒီတာ, သင်နိုင်အောင်ထွက်, သင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက် add နောက်ခံပြောင်းလဲပုံစံမျိုးစုံထည့်နိုင်ပါတယ်။
(က Two-နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်) edited နှင့်မျက်နှာစာများနှင့်သေးငယ်တဲ့များ၏နောက်ကျောနှစ်ဖက်။ နောက်ကျောဘက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နောက်"ထိုအခါကဒ်တဦးတည်းတဖက်သတ်ဖြစ်ပြီးလျှင်, လာမယ့်ပစ္စည်းကို "နောက်" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုဖျက်".
တည်းဖြတ်ပြီးပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ထိပ် panel ကိုအပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ် "ဒေါင်းလုပ် layout ကို".
free download သူတို့မရှိဘဲဗားရှင်းဘို့ရေအမှတ်နဲ့ layout ကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဆိုက်တွင်သင်သည်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်အမိန့်နိုင်ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေ။
Method ကို 2: Card ကို
အခမဲ့ရလဒ်များကိုရလိမ့်မည်ဟုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကိုဖန်တီးရန်ဆိုက်။ နောက်ဆုံးပုံရိပ်အရည်အသွေးအရှုံးမရှိဘဲ PDF ကို format နဲ့ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ layout CorelDraw အစီအစဉ်တွင်လည်းပွင့်လင်းပြင်ဆင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းနှင့်အဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များရှိပါသည်။
ဒါကြောင့်အပေါ်သင်၏စာသားတည်းဖြတ်ရေးကဒ်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက် ထား. ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၏ရှုထောင့်ထဲဝငျဖို့သတိပြုပါလက်ျာဘက်၌ menu ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး, သင်အဆိုပြုထားနှစ်ခုမှရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။
အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်မှာအမည်, လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အမျှအောက်လက်ဝဲ menu ကို, ဝင်နေကြသည်။ ဒုတိယဘက်မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းရန်, tab ကိုသွားပါ "ဘေးထွက် 2".
လက်ျာဖို့ template ကိုရွေးချယ်ရေး menu ကဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ drop-down menu ကို click နှိပ်ပြီးနှင့်သင့်အဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအတာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျသစ်တစ်ခု template ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြပြီးနောက်, အားလုံးသော posts စံဖြင့်အစားထိုးမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါတည်းဖြတ်ပြီးပါက "သေးငယ်တဲ့ Download"။ button ကိုဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ဝင်ဘို့ပုံစံကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, စီးပွားရေးကဒ်တည်ရှိပါလိမ့်မည်သည့်စာမျက်နှာအရွယ်အစား, select လုပ်ပါ, ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များရန်သဘောတူနှင့် button ကို click "သေးငယ်တဲ့ Download".
အဆင်သင့် layout ကိုက e-mail ဖြင့်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း - ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်လိပ်စာ box ကို specify နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Send စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်".
ဆိုက်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေသောကြောင့်နှေးကွေးသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမထားဘူး။ သင်တစ်ဦးသန့်စင်ပြီးဒီဇိုင်းမပါဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်တစ်ပုံစံဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလျှင် - ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ထည့်သွင်းဖို့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးပြီးမှ, မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Method ကို 3: Offnote
ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကဒီမှာယခင်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့မတူဘဲ, စီးပွားရေးကတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အခမဲ့အရင်းအမြစ်ပရီမီယံ access ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိသည်။ အဆိုပါအယ်ဒီတာအားလုံးလုပ်ဆောင်မှုရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ရုရှ interface ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်နှစ်သက်ကြသည်, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
ခလုတ်ကိုအပေါ် home page ကိုကလစ်နှိပ်တွင် "ပွင့်လင်းအယ်ဒီတာ".
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "တစ်ဦး template ကိုဖွင့်ပါ"ထိုအခါမီနူးသွားပါ "ဂန္ထဝင်" နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဆင်အပြင်ကိုရွေးပါ။
သငျသညျနှစ်ကြိမ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ချင်သောကို item ပေါ်တွင်ကလစ်ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, တည်းဖြတ်စာသားကိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက်လိုအပ်သောဒေတာများကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကယ်ဖို့, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ထည့်".
ထိပ် panel ကိုတွင်သင်သည်, ရွေးချယ်ထားကို item ၏နောက်ခံအရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များ၏အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ရှေ့သို့မဟုတ်နောက်ကျောထိုင်ခုံမှတ္ထုရွှေ့နှင့်အခြား configuration ကို tools တွေကိုသုံးပါ။
အဆိုပါ sidebar မှာသငျသညျစာသား, ပုံများ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အပိုဆောင်းဒြပ်စင်၏ layout ကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ layout ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်ရိုးရှင်းစွာတပ်မက်လိုချင်သောပုံစံကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ site ကိုတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲခေတ်မမီတော့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်မဟုတ်သောကတ်များကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသူများအားတားဆီးမထားဘူး။ တစ်ဦးကကြီးမားသောပေါင်း - က output ကိုဖိုင်ပုံစံရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
က MS Word, Photoshop ကို, CorelDraw တစ်ကဒ်လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကူညီပေးဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနိမ့်ဆုံးခွင့်ပြုပါ။ အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအဆင်သင့် layout ကိုရှေးခယျြပါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူခြစ်ရာကနေစတင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မည်သို့ - ကသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအပေါ်သာမူတည်ပါသည်။